Ukunyuka othini soft esangweni behleli vana - China Tianjin Tanggu TWT Valve
valve control Flow
Ukunyuka othini ethambileyo ehleli esangweni valve
esisangqa Double luvela ehleli esangweni valve
Nesonkana esisicaba emnyango double check valve
Ndiwele butterfly valve
esisangqa Double luvela uhleli lukhuni butterfly v ...
Siphose intsimbi U uhlobo lwamabhabhathane vana okanye Icandelo ibhotolo U ...
Iimveliso zenziwa ngokungqinelana ne GB / T24924-2010 / ANSI / AWWA C509-94 okanye BS 5163 imigangatho. Uvavanyo kungqinelana GB / T13927 okanye BS 5163 imigangatho. Umdibaniso esisangqa icala kungqinelana nemigaqo ye GB / 17241,6, PN1.6MPa okanye EN 1092 kwi umgangatho "PN1.0MPa". ubude vana ngesakhiwo ngokuhambelana GB / T12221 standard esangweni vana ubude isakhiwo series elifutshane, kwaye ngexesha elinye ngokuhambelana ANSI B16.10 "ubude isakhiwo vana" kwi-125 wesikiti ...
Iimveliso zenziwa ngokungqinelana ne GB / T24924-2010 / ANSI / AWWA C509-94 okanye BS 5163 imigangatho.
Uvavanyo kungqinelana GB / T13927 okanye BS 5163 imigangatho.
Umdibaniso esisangqa icala kungqinelana nemigaqo ye GB / 17241,6, PN1.6MPa okanye EN 1092 kwi umgangatho "PN1.0MPa".
Ubude vana ngesakhiwo ngokuhambelana GB / T12221 standard esangweni vana ubude isakhiwo series elifutshane, kwaye ngexesha elinye ngokuhambelana ANSI B16.10 "ubude isakhiwo vana" kwi-125 phawundi standard iklasi, okanye BS 5163 imigangatho.
DN65 (2 / ")" ~ (12) 'icala Imilinganiselo uqhagamshelwano esisangqa banokuba ngokungqinelana ANSI / ASME B16.1 "flanges umbhobho yentsimbi uphoswe kunye nezilinganisi flanged" kwi-125 kwiklasi phawundi iimfuno eqhelekileyo.
Medium fluid: amanzi, ioli, igesi
ubushushu Ukusebenzisa: -10 ℃ ~ 180 ℃
Yeye uxinzelelo: PN1.0 ~ 1.6MPa
ubungakanani osebenzayo: DN50 ~ DN600
Uxhulumaniso: esisangqa Uhlobo
standard Uxhulumaniso: GB · ANSI · Din · API · ISO · BS
Body ubomi: Iminyaka 50
Siwisa ngazo umzimba, nangamandla ngokwaneleyo ukuhlangabezana neemfuno kwemo yasemsebenzini, ukuhamba ulwelo akayi ingathinteleki.
Imnyama ilastiki, ungakwazi ukuqhelana uxinzelelo kumbhobho ebangelwe deformation komzimba vana.
Iringi esihlalweni welding, utywinelwe ukunqanda ukuvuza.
Stem: T - idiskhi - stem uqhagamshelwano ukuthintela uxinzelelo isicelo kwicala stem ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle.
Ukupakisha: ukupakisha kwisigcinakaliso eziqulathe, ukuphepha irusi isiqu. Ibhokisi Akunakuba Deep iqinisekisa ubomi inkonzo ende bapakishe.
Ring Seat: isihlalo ivelufa itywiniweyo kwaye welding, nto leyo ukuphelisa ijelo ukuvuza nokulondoloza ubomi nkonzo.
Previous: Non nokunyuka Isiqu ethambileyo ehleli esangweni valve
Next: Ukunyuka Isiqu luvela ehleli esangweni valve
Bs5163 Type A Gate Valve
Bs5164 Type B Gate Valve
Wuphoseni Iron Isango wevalufa
Dn1000 Isango Valve
Dn1200 Isango Valve
Dn900 Isango Valve
Double esisangqa Obomeleleyo Ukuhlala Isango Valve
Ductile Iron Isango Valve
Isango Valve Okanye Sluice Valve
Isango Valve Nge Dlula valve
Size ezinkulu Gate Valve
Non ndibathuma yokuluka Soft Ukuhlala Gate Valve
Non ndibathuma stem Obomeleleyo Ukuhlala Gate Valve
Non ndibathuma stem Soft Ukuhlala Gate Valve
Pn20 Cast Iron Gate Valve
LaseJapan yokuluka Soft Ukuhlala Gate Valve
Ste evelayo m Obomeleleyo Abahleliyo Gate Valve
Ukunyuka stem ethambileyo Ukuhlala Gate wevalufa
Sluice Isango wevalufa
Non nokunyuka othini ethambileyo ehleli esangweni valve
Ukunyuka Isiqu ethambileyo ehleli esangweni valve
Non nokunyuka Isiqu ethambileyo ehleli esangweni valve
Ukunyuka Isiqu luvela ehleli esangweni valve
Isango ivalve okanye sluice isivalo
Idilesi: No. 1999, Jin uJiang Road, Tanggu, Tianjin 300451
Phone: + 86-18722007022
I-South Beijing icandelo Tongzhou DN1 ...